Qatar iyo Imaaraadka Carabta oo isku soo dhowaanaya – Maxaa shalay dhacay? | Dalkaan.com
Home Warkii Qatar iyo Imaaraadka Carabta oo isku soo dhowaanaya – Maxaa shalay dhacay?
Qatar iyo Imaaraadka Carabta oo isku soo dhowaanaya – Maxaa shalay dhacay?
Abu Dhabi (dalkaan) – Wasiirka Arrimaha Dibadda Qatar ayaa Arbacadii tegay Abu Dhabi, wuxuuna la kulmay dhaxal-sugaheeda, taasi oo ah astaantii ugu caddeyd ee muujineysa in xiriirka labada dal ee Khaliijka uu soo hagaagayo.
Previous articleWararka ugu danbeeyay Sacuudiga oo la wareegayo Newcastle United
Next articleLiverpool oo ku biirtay loolanka loogu jiro Dusan Vlahovic
Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda GURICEEL – Maxaa ka socda?
Amisom oo sheegtay tallaabo ay ka qaadeyso askartii dadka rayidka ku...
PSG oo ku dhawaaqday Shaxda Rasmiga ee Kulanka RB Leipzig ,...